Madaxweyne Xasan: Ciidanku wuxuu ku hormari karaa in la isku dhafo askarta gobolada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isku dhafka ciidanka gobollada iyo kuwa Qaranka ay qeyb ka qaadaneyso dhisidda awoodda ciidanka iyo horumarinta federaalka dalka.
Sidoo kale warka ayaa lagu sheegay in Qarameynta ciidamada gobollada ay sii xoojineeyso awoodda iyo cududda ciidamada, ayna soo celin doonto sharaftii iyo kartidii lagu yaqiinay ciidamadeenna.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in haddi la mideeyo cududda ciidamada maamullada iyo kuwa Qaranka. ay markaasi tabar iyo awoodba u yeelandoonaan xaqiijinta amaanka guud ee dalka, ayagoo guulo waaweeyn ka soo hooyndoona la dagaalanka Alshabaab.